E-Ahịa Ahịa-Ahịa: Ngwọta Ngwọta Maka Otu Ihe You Pụrụ Imeli Ihiehie | Martech Zone
Ebumnuche nke oge a gbasara azụmahịa na e-azụtawo na atụmanya ndị ahịa gbanwere. Ozugbo a bara uru-tinye, online àjà ugbu a ghọọ onye bụ isi ahịa touchpoint maka ọtụtụ retail ụdị. Ma dị ka isi mmiri nke mmekọrịta ndị ahịa, mkpa ọ dị nkwado ahịa ahịa dị elu na-adị elu.
Ọrụ ndị ahịa E-azụmahịa na-abịa na nsogbu na nrụgide ọhụrụ. Nke mbụ, ndị ahịa ụlọ na-etinyekwu oge n'ịntanetị tupu ha emee mkpebi ịzụta ha.
81% nke ndị zaghachiri nyochara ngwaahịa ha n'ịntanetị tupu ịme mkpebi ịzụta ha. Nọmba a na - anọchite anya mmụba okpukpu anọ site na nrịanrịa ọrịa nke naanị 20%. Na mgbakwunye, nyocha ahụ chọpụtara na ndị na-azụ ahịa na-ejizi ụbọchị 79 na-achịkọta ozi n'ịntanetị tupu ha ahọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ maka mkpebi ha kachasị ịzụta.
Isi Iyi: GE Isi Obodo
N'ime ụwa ejikọrọ na-achọ ịmata ihe, ahụmịhe ndị ahịa ga bụrụ ihe mbụ dị mkpa banyere ụlọ ọrụ. Laghachite na 2017, dịka ike 93% nke ndi ahia kwuru na nyocha ndị dị n'ịntanetị metụtara mkpebi ha maka ire ere-ka anyị nwere oge karịa na azụmahịa na-eme na ihu anyị, ọnụ ọgụgụ ahụ abawanyela. Ndị na-ere ahịa enweghịzi ike ị nweta ahụmịhe ndị ahịa dị n'ịntanetị. Gbaa mbọ hụ na mmekọrịta dị mma, nke mebere emepụtaghị ọrịre ahịa, ọ bụ atụmatụ lanarị. Ọ ghọwo ihe dị mkpa karịa na afọ-mkpuchi.
N'okpuru ebe a bụ ole na ole nke dijitalụ ọrụ azum na bụla mebere Jeriko mkpa.
Teknụzụ maka Ọsọ Dị Mma: Maka Oge Bụ Ihe Niile
Omuma nke Intanet bu ntabi anya. Enwere ike iji anyị kwụ n'ahịrị na nnukwu ụlọ ahịa, mana onweghị onye chọrọ ichere maka nkwado nkwado. Nke a na-eweta ihe mgbochi pụrụ iche maka ndị na-ere ahịa e-commerce, ndị na-enweghị ike 'mechie ọnụ ụzọ mebere' mgbe elekere na-akụ elekere asaa nke abalị.
Iji kpochapu oge ichere di iche ma megharia ihe ohuru a, ndi na-ere ahia na-agbanye na nkata maka azịza nke ndi ahia. Ndị nkata na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji soro ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụ site na ederede, ozi weebụ, ma ọ bụ ekwentị. Usoro nkuchi nke chatbots jupụtara na ọrịa a niile, ebe ndị na-ere ahịa hụrụ na njikwa ndị ahịa na-ebelata ụgwọ ọrụ ha. Chatbots na-enye usoro a kapịrị ọnụ maka ịnakọta ịkwụ ụgwọ, iwu nhazi ma ọ bụ ịlaghachi, yana ijikwa ndị ga - achọ ịbụ ndị ahịa — ha niile na-efu efu.
N'ihi nke a, Business Insider's akụkọ kachasị ọhụrụ ekwesịghị iju anyị anya. Ha buru amụma na ahịa ndị na-ere ahịa na-eji site na mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ ga-eru ijeri $ 142 n'ime afọ atọ na-esote. Ha chọpụtakwara na ọ dịka 40% nke ndị ọrụ actuallyntanetị n'ezie ahọrọ iji soro ndị na-akparịta ụka na-akpakọrịta karịa sistemụ nkwado ndị ọzọ dịka ndị ọrụ ntanetị.
Teknụzụ maka Ahụmịhe Mmekọrịta: :kpụrụ Ọhụrụ Ndị Ahịa
E-azụmahịa dị iche iche na ọ nwere ike ịme ebe ọ bụla. Branddị enweghị ike ịtụkwasị obi mgbe niile na ndị na-azụ ahịa na-anọdụ n'ụlọ n'ihu ndị nlele zuru oke na weebụsaịtị ha na ngosipụta zuru oke. Ọtụtụ mgbe, ndị na-azụ ahịa na-arụ ọrụ na weebụsaịtị webụsaịtị na ekwentị ha n'etiti ọrụ ụbọchị. Ma data nke Statista chikotara gosi na naanị 12% nke ndị na-azụ ahịa na-atụle ahụmịhe azụmaahịa ha na-adaba adaba.
Thegha ahụ mebere na-etinye nrụgide ọhụrụ na ndị na-ere ahịa iji mee ka ahụmịhe ndị ahịa ha gafee ebe ndị ahịa na-azụ ahịa, ma a bịa n'ihe gbasara ekwentị, enwere ọrụ ga-arụ. Mana ndị na-ere ahịa ndị nọgidere na-etinye ego na ngwọta CRM ha (njikwa mmekọrịta ndị ahịa) achọtala onwe ha n'ọnọdụ ka mma iji jikwaa oge a COVID. Ngwakọta CRM zuru oke na-enye ndị na-ere ahịa ohere ijikwa ahụmịhe ndị ahịa ha gafee ọwa niile, na-ejikọ data ha na-echekwa na ahịa ha n'ịntanetị, mkparịta ụka ha na-akparịta ụka, njikọta mmekọrịta ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ha, yana nsonaazụ mgbasa ozi email ha.
Ọ bụghị naanị na enyemaka a na-enye ahụmịhe ndị ahịa nwere ntụkwasị obi, nke a na-echekwa data ha ma na-adịgide adịgide gafee ọtụtụ ntụpọ, mana ọ nwekwara uru ọzọ agbakwunyere nke itinye data niile dị mkpa n'otu ebe nkịtị. Inye ego na-akpaghị aka na ọtụtụ ihe omume nwere ike ịdaba n'otu ikpo okwu; a na-eme iwu ngwa ngwa, nloghachi na-arụ ọrụ nke ọma karị, ndị nwe ha nwere data niile ha nwere ike ịrịọ maka ike ịkwalite ahịa ha.
Tech maka Target Marketing: Ihe Anyị Maara Ugbu a
Site na ọtụtụ data na-asọba na, ndị na-ere ahịa dijitalụ na-anwale n'akụkụ ole na ole. Otu n'ime atụmatụ mmeri dị ugbu a bụ nnabata nke eziokwu dịwanye elu. Eziokwu gbara ume (AR) na-edozi nsogbu nsogbu COVID: olee otu m ga-esi tụkwasị ngwaahịa ahụ obi ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịhụ ya n'ụlọ ahịa? Ngwa ngwa, ndi otu ahia di nma achoputala azịza ya. Ahụmahụ AR nwere ike ịmegharị ọdịdị nke arịa ụlọ n'ime ime ụlọ, obere nha na otu akara, mkpuchi lipstick na ihu onye ahịa.
AR na-ewere ihe a ma ama site na ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ na-enyekwa ndị na-ere ahịa ihe nlọghachi dị egwu; ndị na-ere ahịa na mmekọrịta, ngosipụta ngwaahịa 3D akọala ọnụego mgbanwe 40% dị elu. Inweta nchekwa nzọ na ndị na-ere ahịa agaghị achọ ịpụ na ahịa ha dị elu n'oge ọ bụla, Statista emeela atụmatụ na ahịa a na-abawanye ụba ga-erute 2.4 ijeri ndị ọrụ site na 2024.
N'ikpeazụ, ndị na-ere ahịa maara ihe na-atụkwasịkwu obi na ịhazi onwe ha dị ka atụmatụ ahịa na-eduga, yana n'ụzọ ziri ezi. E-azụmahịa na-enye otu ihe anyị na-enweghị ike ịmegharị na ụlọ ahịa: onye ọ bụla na-azụ ahịa n'ịntanetị nwere ike 'ịga ije' n'ime ụlọ ahịa dị iche iche kpamkpam. Na-atụ aro ngwaahịa maka uto nke onye na-azụ ahịa n'ịntanetị na-amụba ohere nke ndị na-azụ ahịa ịchọta ihe na-adọta anya ha ngwa ngwa. Inye onyinye ahaziri iche pụtara iji data sitere na ihe nchọgharị gara aga na ọrụ saịtị iji mee ka ịkọ ụtọ ha; ọrụ ọzọ enwere ike ịnweta karịa site n'ike nke ọgụgụ isi. Customization ga-abụ ogidi nke azụmahịa post-COVID, na-agbanwe ọdịdị nke atụmanya ndị ahịa.
Ndị na-akparịta ụka, CRM na-arụkọ ọrụ ọnụ, na azịza data nwere amamihe nwere ike inyere ndị ọkachamara na-ere ahịa aka ijikwa ahịa e-commerce ha. Nnukwu data sitere na ahịa n'ịntanetị nwere ike ịme ahịa ahịa mara mma, na itinye ego na AR yiri ka ọ bụ nzọ dị mma. Na njedebe, Otú ọ dị, onye ahịa ga-enwe okwu ikpeazụ mgbe niile; post-COVID lanarị na-adabere na ndị na-ere ahịa na-ebute ndị ahịa (mebere) mbụ.
Tags: Ihe ngosi 3daiAmamịghe echichekwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuonye ọchụnta egonkataobe-ọwa ahụmahụahịa mbụahịa-centrice-azụmahịaecommercege isi obodoihe omumankwukọrịta ahịakeonweọnụ ọgụgụ